बि.स. २०७५ साल कार्तिक ३० गते शुक्रबार इश्वी सन् २०१८ नोभेम्वर १६ तारीखको राशिफल « Pana Khabar
आज श्री शाके १९४० बि.स. २०७५ साल कार्तिक ३० गते शुक्रबार इश्वी सन् २०१८ नोभेम्वर १६ तारीख कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथी प्रातः ०७ः१४ बजे सम्म पश्चात नवमी तिथी धनिष्ठा नक्षत्र ध्रुब योग वव करण पश्चात वालव करण चन्द्रमा कुम्भ राशिमा सुर्य दक्षिणायन शरद ऋतु कार्तिक मसान्त – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे ।
मित्रजनहरु सगँको सम्बन्धमा प्रगाढता छाउनेछ । आम्दानिका बिभिन्न श्रोतहरु फेला पर्नेछन । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा तथा मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । नयाँकार्यको प्रारम्भले मन हर्षीत रहनेछ ।
अधुराकार्य सुचारु गर्न समयले बिशेष साथ दिनेछ । कार्यप्रतिको लगनसिलताका कारण मानप्रतिष्ठामा समेत बृद्धिगर्नेछ । सामाजिक कार्यमा जुट्ने समय रहेकोछ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा प्रगाढता छाउनेछ ।
कार्यक्षेत्रबाट सामान्य अपजसको भागीदार भईनेछ । यात्राका क्षेत्रमा बिशेष साबधानि अपनाउनु उत्तम रहनेछ । मित्रजनहरु सगँको सम्बन्धमा तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । स्वास्थमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
सामान्य कार्यका निम्ती अधिक श्रम खर्चनु पर्नेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य झन्झट ब्यर्होनु पर्ला । बिश्वासिला ब्यत्तिहरुबाट धोका हुन सक्नेछ । मानसिक चन्चलताका कारण कार्य सम्पादनमा ढिलाई हुन सक्छ ।
जिवन साथिको साथ सहयोगमा गरीएका ब्यपार ब्यवसायमा मनग्य लाभ प्राप्त हुनेछ । अधुराकार्य सम्पादित गर्न समेत समयले साथ दिएकोछ । पारीवारीक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ ।
प्रतिश्पर्दा जन्य कार्यमा अब्बल स्थान प्रात्त रहनेछ । सामान्य यात्राको योग रहेकोछ । मित्रजनहरुको प्रशन्नताका निम्ती सामान्य खर्च रहेतापनि आम्दानी क्षेत्र भने उत्तमनै रहनेछ । कार्य प्रारम्भ भन्दा अघि प्रस्फुटन नगनु उत्तम रहला ।
शारीरिक आलस्यताले गर्दा आम्दानिका क्षेत्रमा परिर्वतनको सम्भाबना रहनेछ । अध्यन अध्यनपनमा अधिक श्रम गर्नु पर्नेछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा कमि महसुस हुनेछ । मित्रजनहरुको अधिक सामिप्यता अहित रहनेछ ।
पारीवारीक साथ सहयोगमा जटिल कार्य सम्पादित रहनेछन । सभा सम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीताको योग बन्नेछ । स्थीर क्षेत्रमा लगाईएको लगानीको उत्तम प्रतिफल प्राप्त रहनेछ । मानसम्मान प्राप्तीको योग रहेकोछ ।
मित्रनजहरु सगँको सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । आटँ र शाहसमा कमी हुनाले कार्य क्षेत्रमा तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । यात्रामा बिशेष सावधानि उपनाउनु उत्तम रहनेछ । कार्य क्षेत्रमा अपजसको सामना गर्नु पर्ला ।
बाणीका कारण मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न हुनेछ । खानपानमा सावधान रहनु होला । ब्यपार ब्यवसायमा सामान्य झन्झट देखा पर्नेछ । सामान्य चोट पटकको सम्भाबना रहेकोले सजग रहनु होला ।
नयाँकार्य थालनिको समय रहेकोछ । स्वास्थमा सामान्य सुधारको योग रहेकोछ । भोजभतेर जन्य कार्यमा सहभागीताको योग बन्नेछ । सामाजीक क्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्तीको योग रहेकोछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहेकोछ ।
परिवारका सदस्यहरु बाट टाढाँ भएको महसुस हुनेछ । यात्रामा सजग रहनु पर्नेछ । खर्चका कारण तात्कालिक आर्थिक अभाबको सामना गर्नु पर्नेछ । बिश्वासिला ब्यत्तिहरु बाट धोका हुन सक्नेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्यादेखा पर्नेछन ।